“Ha layska ilaasho Swedishka cabsan ee midida la ordaya” | Somaliska
“Ha layska ilaasho Swedishka cabsan ee midida la ordaya”
Cilmi baaris ay soo bandhigtay Hay’ada ka hortaga dambiyada (Brottsförebyggande rådet – Brå) ayaa lagu soo bandhigay in dambiyada dhimashada sababa ee ka dhaca Sweden iyo Finland ay geystaan ragg cabsan oo midi wax ku dila.
Baarista ayaa lagu soo bandhigay dambiyada caadiga in ay dhacaan marka labo qof oo wada cabeysay ay isku xanaaqaan taasoo dhalisa in mid ka mid ah oo midi raadsado oo kan kale dhulka dhigo. Dambiyadaan ayaa la sheegay in aysan ahayn kuwo qorsheysan balse ay ku xiranyihiin xaaladaas.
Qamriga ayaa saameyn weyn ku leh dilalka ka dhaca Sweden iyo Finland balse marka loo barbar dhigo Holland ayaa dilalka inta badan waxay ka dhacaan magaalooyinka iyada oo la adeegsanayo hub. Cilmi baarista ayaa lagu sheegay in uu jiro xiriir cad oo ka dhexeeya dilalka iyo alkolada.
Dilalka nuucaan ah ayaa la sheegay in ay inta badan la xiriiraan ragga cabsan oo da’dooda u dhaxeyso 25-60 isla markaana Swedish dhalad ah.
alah umadiisa muslimka ah haka badbaadsho musiibooyiinka galada
xasbunalaah wanimcal wakiil alle hanaga bad baadiyo sharkooda anaga iyo intii islaama amiiiiiin
cayni sh. says:
aamiin aamiin allow naga bad baadi shartoda meel kasto aan dunida ka jogno
October 10, 2011 at 10:53
waxaa ka daran somalida markey cabaan iyaga lee isku mashquulo waliba dumarkla somalida markey caban aa ugu daran shyt